Uchwepheshe we-Semalt: CloudFlare Botnet
Kunesevisi entsha ye-botnet ehlasela amaseva amaningi. I-botnet entsha ayinalo igama kodwa ibangela ukuhlasela okuningi kwe-DDoS. Ama-Botnets avela ochwepheshe be-IT abenza ukuxhaphazwa, i-malware nama-virus ukwenza imisebenzi enonya. Ukuhlasela okusha kwe-botnet kuziphatha njengama-botnets afanayo, njengesibonelo se-Mirai botnet. Le nethiwekhi ye-bots inekhono lokuletha phansi amaseva amaningana ekuhambeni. Lokhu kuxhaphaza kungenye yezokuhlaselwa ezinzima kunazo zonke zokulahla kwenkonzo. Kunezimpikiswano ezikhulayo mayelana nokuhlukunyezwa kwamadivayisi we-IoT kulokhu kuhlaselwa. Lezi gadget zizobe zithola ukuthengisa okuningi esikhathini seKhisimusi. I-Nik Chaykovskiy, i-8 (Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uchaza ukuthi ngalesi sikhathi, abaduni bangaba nethuba lokuhambisa ukuhlasela okuningi kwe-botnet kuma-server ahlukene.
NgoNovemba 23, i-CloudFlare yaqaphela ukuhlaselwa kwebhoknethi ejwayelekile ehamba phambili ku-400Gbps nomkhawulo omncane we-172Gbps. Kuthatha ama-CloudFlare ochwepheshe cishe amahora angu-8.5 ukuphendula lokhu kuhlasela kwe-DDoS. Ukuhlasela kwe-botnet kuthatha izinsuku eziyishumi ukuphika inkonzo yamaseva athile. Lokhu kuhlaselwa kwe-botnet kwakusebenzisa ukubethelwa okunamathekisthi okwakunezici eziningi ezivela ku-Mirai botnet. Isibonelo, sinezikhukhula ezinkulu zeLala 3 ne-Layer 4 ezihlasela isenzo esilandelayo se-TCP. Kukhona ukuhlaselwa eJalimane okuholela ekuthunjweni kwenkonzo kumakhasimende akwaDeutsche Telekom..
Ama-botnets angathinta umhlaba wokudlala
Lo Khisimusi, abadlali bangase babe nakho ukuhlaselwa kokuhlaselwa kwamanye amanethiwekhi abo. Ezinye zezincomo ze-Microsoft Xbox ziye zabhekana nokuhlaselwa okunjalo. Ngisho namanethiwekhi we-PlayStation we-Sony ahlaselwe yimishini ye-botnet. Amabhizinisi amaningi aphumelelayo abhekana nokuhlaselwa okukhulu phakathi nenkathi yemikhosi.
Amabhizinisi ezentengiselwano ezinamawebhusayithi e-commerce angase ahlupheke nokuhlaselwa kwe-botnet. Uma isayithi ihlehla, kungase kuvele ukuqhubekela phambili okubi emikhankasweni yokumaketha (digital) . Isibonelo, isimo sewebsite yakho singadlula i-SERP. Kwezinye izimo, amakhasimende angakwazi ukulahlekelwa ukwethemba kuwebhusayithi yakho, futhi ekugcineni abe amaklayenti omncintiswano wakho. Amanye amasu we-SEO counter asebenzisa ukusetshenziswa kokuhlaselwa kwe-botnet kusayithi lakho lokuncintisana. Lezi zindlela zamakhanda ezimnyama zisiza ukuhlaselwa okunonya kufinyelela ezinkambisweni ezisengozini kubo.
Yonke ibhizinisi le-e-commerce lidinga ukuqaphela ukuhlaselwa kwe-cyber okuyinto engasongela abasebenzisi bayo. Kunesidingo esikhulu sabasebenzisi ukuthola izindlela ezingcono zokuvikela amanethiwekhi wabo emotweni ye-botnet. Esikhathini esidlule samuva, ukuhlaselwa okuningi kwe-Denial of Service kubhekene nezinsiza eziphumelelayo. Amabhizinisi athola ukulahlekelwa okukhulu kulokhu kuhlaselwa. Kunamanethiwekhi ambalwa amakhompyutha e-Zombie ahlasela amanethiwekhi amakhompyutha. I-CloudFlare yabhekana nokuhlaselwa okwenza imisebenzi ekhubazekile enkampanini yabo. Amabhizinisi amaningi ancike kulokhu kuhlaselwa. Ungathola izindlela ezintsha zokubhekana naloluhlobo lokuhlaselwa kule nhlahlandlela. Kubalulekile ukuhlunga i-botnet traffic kwiseva yakho Source .